Kedu ihe ọhụụ anyị na-atụ anya site na smartphones na 2021? | Gam akporosis
Ndị ọrụ Smartphone na-akpọ akụkọ ihe mere eme na ihe ọhụrụ. Kwa afọ, ma obu obu ihe omuma ohuru ohuru, anyị na-atụ anya atụmatụ ọhụrụ ma ọ bụ ụfọdụ ezigbo ọhụụ nke na-abụghị ihe mmezi dị mfe. Enweela nke oma n'afọ 2021 anyị na-eche ịmara ihe teknụzụ nke ekwentị ndị na-abịanụ nwere ike iju anyị anya. Whathụ ihe 2020 pụtara na usoro nke akụkọ, enweghịkwa atụmanya dị elu maka afọ a.
Ma na-ele anya n’afọ gara aga na ihe o nyegoro anyị, anyị nwere ike nwetụ echiche ntakịrị banyere ebe akụkọ a chọrọ anya ga-esi ruo. O di nwute, ọtụtụ n'ime atụmatụ ọhụrụ ndị a dị ka ọ bụ ndozi nke teknụzụ ọhụụ nwere ọtụtụ ohere maka imeziwanye na mmepe. Ya mere Anyị echewo echiche banyere akụkụ 4 ma ọ bụ 5 kachasị mma nke smartphones nwere ike ịmalite.
1 Ọhụrụ maka igwegharị anyị na 2021
1.1 The enyo
1.2 Nchaji batrị
1.3 Igwefoto selfie n'okpuru
1.4 Ekwentị na-enweghị ọdụ ụgbọ mmiri
Ọhụrụ maka igwegharị anyị na 2021
Ihuenyo ahụ bụ ebe ọ bụ na mmalite nke ekwentị mkpanaaka n'okpuru mmelite na ọganihu. Anyị si na inwe smartphones nwere ihu site na sentimita 3,5 ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ sentimita asatọ gburugburu ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị dị ugbu a. Ihuenyo toro n'ike n'ike Ruo mgbe ị ruru n'afọ ndị na-adịbeghị anya, nke kachasị ibu enwere ike iburu n'uche akụkụ nke ngwaọrụ "nkịtị". Ọzọkwa agbanwewo nke ukwuu na ogo na mkpebi, na ugbu a anyị nwere nnukwu ogwe.
Gara aga 2019 Anyị hụrụ otú, mgbe ọtụtụ afọ nke ịkọ nkọ na asịrị, mechibidoro ihuenyo mechara bụrụ ebe a gaa na ekwentị mkpanaaka. Otu ụzọ site na Samsung na Huawei nke sitere na ya a ka nwere ọtụtụ ihe iji meziwanye na 2021. Mmetụta mbụ ị nyere mgbe ị hụrụ otu n'ime mpịachi ndị a bụ na ha dị oke oke. Maka nke a, n'etiti ihe ndị ọzọ, a pụrụ imezi atụmatụ na nha nke ọma.
Site ugbu a gaba, 2021 nwere ike ịbụ afọ ntụgharị ihu. Enwere ọtụtụ onyonyo nke kesara na ngosipụta na nsụgharị nke ekwentị mkpanaaka nwere ihu na-agbagharị. Ọ bụ ezie n’agbanyeghi na ole anyị chọrọ ịhụ ụdị ọnụ ụlọ a ọ dị ka ọrụ mmepe ogologo ọ na-echere. Anyị amaghị ụdị ha ga-emecha mee na a ka nwere ọtụtụ obi abụọ na ikuku. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ngbanye ihu ndị a ga-enwe nkwụsi ike zuru ezu iji pịnye ha dịka anyị si eji ngwaọrụ anyị dị ugbu a.
Obi abụọ adịghị ya na Batrị, ya mere nnwere onwe na smartphone nwere bu otu n'ime nchegbu dị ukwuu nke ndị ọrụ. Mgbe ọtụtụ iri afọ nke mmepe, ọ dị ka nke ahụ Ọ dịghị mfe ịchọta batrị na-adịgide adịgide n'ezie. Ike oriri nke nnukwu ákwà, GPS, na ihe ndị ọzọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịkwadebe smartphone na batrị "na-adịte aka" n'ebughị ụzọ nyochaa ngwaọrụ ahụ. Ma ọ bụ ime ka ọ nwee ibu nke na-agaghị ejikwa ya.
Maka nke a, ọ ghọrọ mkpa, na nke ukwuu, batrị ụgwọ, na karịsịa ọsọ ya. Ọ bụ ihe niile a milestone mbata nke wireless Nchaji na ekwentị anyị. Ma ọ ga-ekwe omume na 2021 anyị ga-ahụ kọntaktị wireless Nchaji. Ọ bụ ezie na eziokwu bụ na teknụzụ a emebeghị ka ọ guzosie ike dị ka ọ dị na mbụ. Anyị amataworị na mmebi ahụ dị n'aka ndị nrụpụta maka itinyeghị chaja ikuku na ngwaọrụ ndị ọhụrụ. Ihe na nwute dị ka anyị agaghị enweta ya.
Ọsọ nke nbudata ngwaọrụ anyị ga-emesị bụrụ ihe ga-eme ka ha dị iche na ibe ha. Anyị ahụwo otú a na-ebelata oge a na-ekwụ ụgwọ ekele maka chaja na ngwa ngwa ngwa ngwa. Ugbua ụfọdụ smartphones nwere ike zuru ezu ebubo na 30 nkeji ma enwere ike imezu ya na obere oge. Ezigbo ihe ọhụụ ga - abụ ibu ha ugboro ugboro, mana ọ dị ka anyị ga - edozi ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Igwefoto selfie n'okpuru
Oge eruola ka ewepụ ha otu ugboro jọgburu "notch" nke enwere ọtụtụ ọdụ ugbu a. Onye ama ama "nkuanya" nke biara na iPhone ma ndi ozo ndi ozo meghariri ya mebiri emebi nke igwe anyi. Ọ dabara, enwere ọtụtụ ndị gbanwetụrụ iji meziwanye ngwọta a dịka o kwere mee iji zoo igwefoto dị n'ihu na ihe mmetụta dị ka nso ma ọ bụ ìhè.
Na 2021 ọ dị ka nke ahụ anyị ga-ahụ ngwaọrụ mbụ nke ga-etinye kamera ha n'ihu n'okpuru ihuenyo ahụ, zoro na ngosipụta nke ekwentị n'onwe ya. Samsung na-ekwu na ngwaọrụ ya nwere igwefoto ihu na ihu n'ihu ihuenyo dị na usoro mmepe di elu. E nwekwara asịrị na Apple na-arụ ọrụ iji nye ọhụụ a naanị gị ọzọ iPhone. Ma ị na-enwe mmasị na onwe gị ma ọ bụ na ị chọghị, ese foto na-eche ihu n'ihu, ọ bụghịkwa ngwọta niile anyị hụrụ na ahịa arụ ọrụ, dị ka igwe foto dị mma.
Ihe kachasị mma nke ọganihu na teknụzụ a bụ na 2021, anyị nwere ike imecha nweta akwụkwọ ọhụụ mara ọkwa ọtụtụ afọ gara aga, ihe niile na ihuenyo ama. N'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ma e wezụga "elu elu" ahụ e kwuru n'elu, igwefoto dị n'ihu na-ewe ohere site na ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na enwere ọganihu na mbenata bezels nke ngwaọrụ ahụ karịa, enwere ike na-eto eto. A) Eeh enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ zuru ezu iji nyefee ahụmịhe ihuenyo zuru oke.
Ekwentị na-enweghị ọdụ ụgbọ mmiri
Oge adịghị anya anyị na-etinye aka anyị n’isi anyị mgbe ndị nrụpụta dị iche iche kpebiri zụọ na ọdụ ụgbọ mmiri 3,5 mm. Isi ọdụ ụgbọ mmiri nke na-adịbu ebe ahụ wee yie ka ọ gaghị enye onye ọ bụla nsogbu. Onwere otutu ndi na emeputa ihe kpebiri dika ihe ohuru iji nye aka n'ọdụ ụgbọ mmiri a. O yikwara ka omume ahụ ga-aga ọzọ, ruo mgbe ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ dị na ekwentị mkpanaaka ga-apụ n'anya.
Teknụzụ dị ugbu a na-enye ohere zuru oke na ekwentị anaghị achọ ọdụ ụgbọ elu Ọbụghị ncha ncha. Na-agụta na otu oku e-SIM Anyị agaghị achọ oghere ịmepe kaadị nke ụlọ ọrụ ekwentị anyị. Ọ bụrụ na ngwaọrụ nwere Nchaji ikuku, anyị achọghịkwa njikọ njikọ ụdị ọ bụla. Na njikọ isi okwu site na Bluetooth Obu ihe anyi jizi anya. N'ihi nke a, mbata nke ekwentị nwere ike ikuku kpam kpam.
Kedu ihe ị chere ga-abụ ezigbo mbụ maka ekwentị mkpanaaka na 2021?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Kedu ihe ọhụụ anyị na-atụ anya site na smartphones na 2021?